Sandals Team Member Exchange Mmemme iji bulie ọrụ Caribbean
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Sandals Team Member Exchange Mmemme iji bulie ọrụ Caribbean
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Caribbean • Akụkọ Curacao • Education • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Resorts • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Saint Vincent na Grenadines na -agbasa akụkọ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Ndị Turks na Caicos Breaking News • Akụkọ dị iche iche
Sandals Team Member Mmemme
Akụkụ bụ isi nke atụmatụ atụmatụ Sandals maka Mmemme Mgbanwe Mpaghara ya bụ ịbawanye ọrụ ozugbo ma bulie mgbasa ozi dị n'etiti Caribbean.
Akpụkpọ ụkwụ Sandals na-agbago usoro Mmemme Otu Ndị otu gbanwere ogologo oge iji mee ka otu mpaghara mpaghara ya.
Mmemme Mgbanwe ahụ bụ ụzọ sitere na Mahadum Sandals Corporate ma na-enye ohere ka ndị ọhụụ ọhụrụ tinye aka na ọdịbendị ntụrụndụ.
Ihe omume a na - eme ka ndi oru Sandals na - arusi oru ndi mmadu ike ma na - eme ka ha nwee mmetụta na ọdịbendị, na-etinye ha ka ha bụrụ ụmụ amaala ụwa.
N'ime afọ anọ sochirinụ, ọtụtụ puku ndị mba Caribbean ga-erite uru site na ịbawanye ọrụ na ohere ọzụzụ mpaghara dị ka Sandals Team Member Exchange Program (TMEXP) guzobere ogologo oge, na-achọ itolite ndị otu mpaghara si na 15,000 ruo ndị otu 20,000.
Nke a na - esote ọkwa ọkwa nkwari akụ ndị na - adịbeghị anya banyere ihe ọhụrụ, mmụba ya na mpaghara nke iteghete nke agwaetiti Caribbean, yana atụmanya nke mgbake zuru oke nke mpaghara njem ndị njem na mpaghara na - eso mmetụta ọjọọ nke coronavirus.
Akụkụ bụ isi nke atụmatụ Sandals Resorts International (SRI) na-eche ihu n'ọdịnihu bụ Mmemme Membertù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ nke company'slọ Ọrụ nke na-ahụ na-aga n'ihu na-agagharị nke ndị obodo Caribbean na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe ntụrụndụ nke ụlọ ọrụ ahụ gafee mpaghara ahụ. Mmemme Mgbanwe ahụ bụ atụmatụ site na Mahadum Sandals Corporate University (SCU) ma na-enye ohere maka ndị ọhụụ ọhụrụ ka ha mikpuo onwe ha na ọdịbendị Sandals na Beaches, ebe ndị ọrụ dị ugbu a na-aga na ebe ndị ọzọ, na-enye ohere iji gaa njem ma gosipụta ọhụụ ọhụụ gburugburu na ọdịbendị, gbasaa nkà ha na nghọta ha, kwalite mmepe ọrụ ha, ma nwee mmetụta dị mma n'ọrụ ha na nloghachi n'ụlọ ha.
Ihe omume a bụ ihe ngosipụta doro anya nke ntinye aka nke SRI na njikọta mpaghara yana nha anya, itinye ego ya na ndị ya, bụ nke mejupụtara nke ọma site na mmemme dịka Mmemme Trainee Management (MTP). MTP na-achọpụta ma na-achọgharị ndị ntorobịa pụtara ìhè ka ha bụrụ ndị njikwa na ụlọ ọrụ site na mmụta na ọzụzụ na ntụrụndụ na mpaghara niile. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ mbanye n'ọrụ mpaghara niile, na-enye ndị mba Caribbean ọrụ na-aga n'ihu ma na-erite uru na nkwekọrịta CARICOM nke Ndị Ọkachamara.
Onye isi oche nke SRI, Adam Stewart, kwuru na ụlọ ọrụ ahụ nwere ezigbo nchekwube banyere ọdịnihu nke njem na Sandals na-eduga ọrụ na mgbake ya zuru oke na mpaghara ahụ. “Sandals Resorts International ka bụ ezigbo ngosipụta nke mmụọ nke CARICOM. Mgbe n'ime oge dị mkpirikpi, anyị gbadoro anya na ndị otu anyị niile nọ ugbu a ịlaghachi n'ọrụ, anyị na-elekwa anya n'ọdịnihu na ebumnuche anyị ogologo oge. Site na nkwuputa anyị maka Curacao na St. Vincent & na Grenadines, o doro anya na ohere dị ọ bụghị naanị maka ndị otu otu dị site na ebe obibi anyị na Turks & Caicos, Grenada, Antigua, Jamaica, Barbados, Saint Lucia, na The Bahamas, kamakwa ndi ohuru ohuru si na agwaetiti ohuru a. Anyị nwere obi ụtọ na ọdịnala anyị dị ogologo oge nke ịnye oke oke na ohere maka ndị bi na mpaghara ka ha mụta nkà ọhụrụ na ịkekọrịta ndị ha nwere. ”
A na-ekpebi mmemme ọzụzụ pụrụ iche nke onye ọ bụla, gụnyere ogologo oge ịnọ mba ofesi na ebumnuche mmụta, site na mmekorita ya na ụlọ obibi na SCU. Ndị niile sonyere ga-ewepụta akụkọ na-egosi na ngwụcha nkuzi ha, a ga-ekenyekwa ndị nkuzi SCU ndị ga-enyere ha aka na njem ọzụzụ ha niile.
Stewart gbakwụnyere, sị: “Isi mmalite nke ọzụzụ a bụ usoro nke ịmụ ihe miri emi. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị wuru ọdịbendị akpụkpọ ụkwụ siri ike ma dị iche nke mere ka anyị bụrụ onye na-edu ndú zuru ụwa ọnụ. Anyị chọrọ ka ndị anyị gaa n'agwaetiti ndị ọzọ, jiri oge dị mma ma mụta ihe n'aka ndị ọrụ ibe ha na mba ndị ọzọ. Agwaetiti ọ bụla pụrụ iche, yabụ na ọ nwere ebe izu ike ọ bụla. Mmemme Exchange a abụghị naanị na-ewusi ndị ọrụ mpaghara anyị ike kamakwa iji nye ha ụdị ngosi na mmetụta ọdịbendị nke mere ka ha bụrụ ụmụ amaala ụwa. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọ toụ ịmalite mmemme a ma bido ịmalite ihe anyị maara ga-anọgide na-abụ ihe nlere maka ọzụzụ mpaghara, mmepe, na ọrụ. "
Iji mụtakwuo maka Mmemme Mahadum nke Sandals, gaa: https://www.sandals.com/about/
Ozi ndị ọzọ banyere akpụkpọ ụkwụ
Ugbu a Seychelles apụla na Ndepụta Red UK
Pandaw Cruises Ugbu a emechila maka azụmaahịa maka ịdị mma n'ihi…